SharePlay ichauya kuMacs gore risati rapera | Ndinobva ku mac
SharePlay ichasvika paMacs gore risati rapera
Tony Cortes | 19/11/2021 14:00 | macOS Monterey
Muchikamu chekupedzisira cheWWDC gore rino, Apple yakatizivisa kuti chimwe chezvitsva zvakaratidzwa neMacOS Monterey kwaive kuenderana nebasa racho. Share Play izvo zvatinoziva mune mamwe ese emidziyo yekambani.
Kubva munaSeptember takagara navo macOS Monterey muMacs edu, uye panguva ino basa iri harina kuiswa. Ikozvino Apple yakaburitsa kuti gore risati rapera, tichagashira nyowani macOS Monterey dhizaini ine yakataurwa ficha yakaitwa uye inoshanda zvizere. Tichaona ipapo.
Apple yakazivisa zviri pamutemo nhasi kuti SharePlay yeMac ichaburitswa sechikamu chetsva macOS Monterrey update yakarongerwa gore rino risati rapera. Nhau huru, pasina kupokana.
SharePlay chinhu chitsva cheApple chinokupa iwe kugona share Zviitiko zveApp nevamwe vashandisi zvakananga kubva kuFaceTime. Apple yakapawo vanogadzira zvishandiso zvekushandisa zvakadaro SharePlay mashandiro mune yavo yechitatu-bato maapplication.
PaIOS uye iPadOS, akati wandei maApple maapuro anotsigira iyo SharePlay chimiro, kusanganisira TV, Mimhanzi, uye Podcasts. Ivo "vanogamuchira" vashandisi vezvataurwa inofanirawo kunyoresa kuSevhisi kuti unakirwe nezvinogovaniswa kuburikidza neSharePlay. Ndokunge, kana iwe uchida kugovera rwiyo rweApple Music neshamwari yako, unogona kuzviita chero bedzi iwe wakanyoreswa kuApple's mimhanzi chikuva.
Zvishandiso zvine SharePlay
SharePlay iripo parizvino pane zvinotevera zvishandiso:
iPhone uye iPod touch ine iOS 15.1 uye gare gare
iPad ine iPadOS 15.1 uye gare gare
Apple TV ine tvOS 15.1 uye gare gare.
Kwete chete iwe unogona kushandisa SharePlay mune zvekuzvarwa Apple maapplication. SharePlay ichave inoenderana nehuwandu hweanozivikanwa echitatu-bato zvikumbiro, senge Spotify. Apple yakaratidza akati wandei echitatu-bato mapurogiramu anototsigira SharePlay, kusanganisira NBA, TikTok, Twitch, Paramount +, uye SHOWTIME.
Semuenzaniso, kana uine Apple TV, unogona kuona yakagovaniswa midhiya pachiratidziro chikuru uchishandisa FaceTime pa iPhone yako kana iPad. Nerutsigiro rwekugovana skrini, iwe neshamwari dzako munogona kusefa pawebhu pamwe chete, kutarisa mafoto, kana kuona vhidhiyo muapp yaunofarira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS Monterey » SharePlay ichasvika paMacs gore risati rapera
Black Friday yave kuwanikwa paAmazon pane Apple zvigadzirwa
Apple, Drake naTravis Scott vakamhan'ara pamusoro pekufa kwekonzati yeAstroworld